SARIPIKA: Hafatra Artistikan’ny Mozea Palestiniana Iray Hoan’ny Papa · Global Voices teny Malagasy
SARIPIKA: Hafatra Artistikan'ny Mozea Palestiniana Iray Hoan'ny Papa
Voadika ny 26 Mey 2014 0:15 GMT
Nifantohan'ny mpikatroka maro manantena ny hiresahan'ny pontifa Katolika hirona amin'ny fotokevitra ijoroan'ny Palestiniana ny fitsidihan'ny Papa any amin'ny Tany Masina (fitsidihana androany tany Jordania, Palestina ary Israely).
Natao tamin'ny alalan'ny maso artistika ny hetsika an-tsariohatra (saimbolika) iray natao ho amin'izany fanantenana izany. The Palestinian Museum, mozea iray vaovao niomanana hisokatra ao anatin'ny lohataona 2015, no nanangana afisy vaventy maro tao amin'ny Kianjan'ny Fihinanam-Bilona ao Bethlehema ho tafiditra anatin'ny hetsika “In The Presence of the Holy See” izay mampiseho ny ankamaroan'ny kisarisary Katolika mifandrafy amin'ny fijaliana Palestiniana.
Manasongadina ny 12 amin'ireo afisy vaventy ireo ao amin'ny pejy Facebook-ny Mozea. Andao hojerentsika izany:
Zavakanto: Ecce Homo (c. 1605) nataon'i Michelangelo Merisi Caravaggio, maneho an-tsary an'i Pontio Pilato manolotra an'i Jesoa eo anoloan'ny vahoaka mitabataba.
Saripika: Palestiniana miampita ny toera-pisavana ao Qalandiya raha ho any Jerosalema. 20 Avrily 2002, avy amin'i Alexandra Boulat.
Zavakanto: Tompovavin'ny Rôzery (c. 1607) avy amin'i Michelangelo Merisi Caravaggio.
Saripika: Masoandro mitaratra tamin'ny tafo fialofan'ny mpialokaloka Palestiniana ao amin'ny toby Burj el-Barajneh, Libanona tamin'ny 1993. Avy amin'i M. Nasr, Sampandraharahan'ny Firenena Mikambana Miasa sy Manampy ireo Mpialokaloka Palestiniana ao Afovoany Atsinanana (Akaiky?) (UNRWA) sary tahiry.
Sary mainty sy fotsy: tobim-pialokalofana ao amin'ny tomandavan'i Gaza. Sary tahiry avy amin'ny UNRWA.
Sary miloko: Miaramia Israeliana eo amin'ny toera-pisavana ao Qalandiya. 20 Avrily 2002, avy amin'i Alexandra Boulat.
Sary mainty sy fotsy: Fizarana fitafiana ao amin'ny tobin'ny mpialokaloka ao Rafah ao amin'ny Tombandavan'i Gaza, 1972. Avy amin'i Kay Brennan, sary tahiry UNRWA.
Sary Miloko: Miaramila Israeliana misava zazalahy Palestiniana eo amin'ny toera-pisavana eo Hebrona.
20 Nov 2005, avy amin'i Nayef Hashlamoun.
Sary mainty sy fotsy: tobim-pialokalofana Dheisheh taorian'ny fivakisana tamin'ny 1948. sary tahiry UNRWA.
Sary miloko: Ampahan'ny rindrim-pisarahana Israeliana manakaiky an'i Beit Hanina ao Jerosalema, 2012. avy amin'i Tanya Habjouqa.
Sary mainty sy fotsy: Iray amin'ireo mpialokaloka vitsy sisa tavela taorian'ny ady an-trano tao amin'ny toby Jisr el-Basha mandany fotoa-mangina ao amin'ny Fiangonana Misiona Pontifikaly ao Libanona 1976. sary tahiry UNRWA.
Sary miloko: Foiben'ny Filoha Palestiniana (al-Muqat’a) ao Ramallah, 2002. Avy amin'i Jamal Arouri
Zavakanto: Sorona nataon'i Abrahama (c. 1635) nataon'i Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
Saripika: Miaramila Israeliana sempotry ny fofom-paty ao amin'ny tobin'ny mpialokaloka ao Jenin ampitan'i Jordania. 16 Avrily 2002, avy amin'i Alexandra Boulat.
Zavakanto: Ny Fanitrihana (c. 1507) avy amin'i Raphaello Sanzio da Urbino.
“Amin'izany andro izany hisy androm-pisaonana lehibe any Jerosalema“ Zakariah 12:11.
Saripika: miaramila Israeliana mamono Palestiniana sy managadra ny hafa ao afovoan-tanànan'i Ramallah. 31 Marsa 2002, avy amin'i Alexandra Boulat.
Zavakanto: Ny Tsi-finoan'i Masindahy Tomasy (c. 1602) avy amin'i Michelangelo Merisi Caravaggio. “Ataovy eto ny rantsan-tananao ary tsapao ny mahanofo ahy.”
Saripika: Polisy misahana ny sisintany Israeliana manamarina ny karapanondron'ny Palestiniana iray eo amin'ny fiampitana an'i Qalandiya mandritra ny Ramadany. 20 Aog 2010, avy amin'i Matt Milstein.
Zavakanto: Kristy manasitraka ilay Paralitika ao amin'ny Dobon'i Bethesda (c. 1670) avy amin'i Bartolomé Esteban Murillo. “Mitsangàna, raiso ny fandrianao ary mandehana,” Jaona 5:8.
Saripika: Palestinian ho any Gaza mndalo ny toera-pisavana ao Erez. 24 Mey 2006, avy amin'i Alexandra Boulat.
Sary mainty sy fotsy: Palestiniana mpialokaloka miampita ny tetezana ho any Jordania tamin'ny Jolay 1967. Avy amin'i Myrtle Winter, avy amin'ny sary tahiry UNRWA.
Sary miloko: Vehivavy koditra avy any an-tranony ao Bint Jbail nandritra ny “fitsaharan'ady vetivety“ ao Atsimon'i Libanona nandritra ny ady nataon'i Israely tamin'ny 2006. Avy amin'i Tanya Habjouqa.
Zavakanto: Vavaka fitarainan'i Kristy (c. 1606) avy amin'i Annibale Carracci.
Saripika: Fanalana voalohany ny tsy fahazoana mivezivezy tao amin'ny toby fialokalofana taorian'ny daroka baomba nataon'i Israely tao Jenin. 15 Avrily 2002, avy amin'i Alexandra Boulat.